Into ephezulu kakhulu yendalo kwihlabathi
Iyiphi into ebiza kakhulu ? Lo ngumbuzo okhohlakeleyo wokuphendula ngenxa yokuba ezinye izinto azikwazi ukuzithengwa kwifomu ecocekileyo. Ngokomzekelo, izinto eziphezulu kakhulu ekupheleni kwitheyibhile yenkqubela zizinzileyo, nokuba ngabaphandi abazifundayo abanalo isampuli ngaphezu kweqhezu lesibini. Iindleko zale micimbi yintloko yentengo ye-synthesis yayo, eqhuba kwizigidi okanye iibhiliyoni zeedola nganye nge-athomu.
Nantsi ingqwalasela kwindalo yendalo ebiza kakhulu kunye neyona nto ibiza kakhulu nayiphi na into eyaziwayo ukuba ikhona.
Uninzi oluninzi lwezendalo
Into ephezulu kakhulu yemvelo yi- francium . Nangona i-francium ivela ngokwemvelo, ihlabala ngokukhawuleza kangangokuthi ayikwazi ukuqokelelwa ukusetyenziswa. Kuphela ii-athomu ze-francium ziveliswe ngezorhwebo, ngoko ke ukuba ufuna ukuvelisa i-gram e-100 ye-francium, unokulindela ukuhlawula i- dollar ezimbalwa ze- US. I-Lutetium yinto ebiza kakhulu enokuyilungisa kwaye uyithenge. Ixabiso le-100 gram ye-lutetium lijikeleze i-$ 10,000. Ngoko, kwindlela ethile, i-lutetium yinto ebiza kakhulu.
Iindleko zeMpawu zoNyaka
Izinto ze-transuranium, ngokubanzi, zibiza kakhulu. Ezi zinto ngokuqhelekileyo zenziwe ngabantu , kunye neendleko zokuzihlukanisa inani lemilinganiselo ye-transuranic ekhona ngokwemvelo. Ngokomzekelo, ngokusekelwe kwiindleko zexesha lokukhawulezisa, amandla omntu, izinto, njl, i- californium iqikelelwe ukuba ixabise malunga ne-2.7 yezigidigidi zeedola ngalinye kwi-100 grams.
Unokuyichaphazela loo xabiso kunye neendleko ze plutonium , eqhuba phakathi kweedola ezi-5,000 kunye ne-13,000 kwi-100 grams, kuxhomekeke ekuhlanzeni.
Iindleko zeAntimatter ezingaphezu kwezinto
Ngokuqinisekileyo, unokuphikisa izinto ezichasayo, eziyizinto ezicacekileyo, zibiza kakhulu kunezinto eziqhelekileyo. UGerald Smith uqikelele ukuba ama-postitron angenziwa malunga ne-25 biliyoni ngegrama, ngo-2006.
I-NASA yanikezela i-$ 62.5 triliyoni ngegram ye-antihydrogen, ngowama-1999. Nangona awukwazi ukuthenga i- antimatter , kwenzeka ngokuqhelekileyo. Ngokomzekelo, iveliswa ngumbane othile uhlaselwa. Nangona kunjalo, i-antimatter ithatha into ngokukhawuleza.
Ezinye izinto ezincinci
IGolide yinto ebalulekileyo, ixabisa i-$ 39.80 ngegrama. Nangona ixabiso elincinci ngaphezu kwe-lutetium, kulula ukufumana, luncedo ngakumbi, kwaye kulula ukurhweba.
Njengegolide, i-rhodium yinto ebalulekileyo yensimbi . I-Rhodium isetyenziswe kwizinto zokugcoba kunye nabaguquleli be-catalytic. Kufuneka ujikeleze i-$ 45 ngegrama.
I-Platinum inexabiso elithelekiswa nelo rhodium. Isetyenziswe njenge-catalyst, kwiigrafu, nakwezinye iziyobisi. Iindleko malunga ne-$ 48 ngegrama.
I-Plutonium yinto eyenza i-radioactive engasetyenziselwa uphando kunye nezicelo zenukliya. Kuyafaneleka malunga ne-4000 yegrama nganye (nangona unokulindela ii-arhente ezilawulayo ezahlukahlukeneyo ukuba uziqwalasele ngokukhawuleza ukuba uqala ukuzihlanganisa).
I-Tritium yi-isotope yomsakazo ye-element element ye-hydrogen. I-Tritium isetyenziswe kuphando kunye nokukhanyisa i-phosphors njengomthombo okhanya. Ixabisa i-$ 30,000 ngegrama.
I-Carbon ingaba enye yezinto ezincinci kakhulu (njenge-carbon carbon okanye i-soot) okanye ixabiso elikhulu (njengedayimane). Ngelixa idayimane zihluka kwixabiso, idayimane engenakulinganiswa iya kukuqhubela phezulu kwi-65,000 yegrama.
I-Californium yenye into eyenza i-radioactive, isetyenziswe ngokuyinhloko kuphando kunye nezixhobo ezisetyenziselwa kwishishini le-petroleum. Igram ye-californium-252 inokuhlawula iidola ezingama-27 ngegragram, eyenza ibe yindleko ephezulu ngaphezu kwe-lutetium, kodwa ngaphantsi kwe-francium. Ngethamsanqa, kuphela ubuncinane be-californium efunekayo ngexesha.
Izinto ezinokungcola ziphantsi
Ukuba awukwazi ukufumana i-francium, i-lutetium, okanye yegolide, kukho ubuninzi bezinto ezifumaneka ngokulula kwifomu ecocekileyo. Ukuba uke watshisa i-marshmallow okanye isiqwenga se-toast, umthunzi omnyama wawuphantse ukhangele i-carbon khanya.
Ezinye izinto, ngexabiso eliphakamileyo, ziyafumaneka ngokulula kwifomu ecocekileyo. Ubhedu kwi-wiring yamandla ngaphezu kweepesente ezingama-99. I-sulfur yemvelo iqhutyana neentaba.
Into ephezulu kakhulu yemvelo yi-francium, kodwa iyancipha ngokukhawuleza ayikwazi ukuqokelelwa ukuba ithengiswe. Ukuba ungayithenga, uza kuhlawula iibhiliyoni zeedola ezilikhulu.
Into ephezulu kakhulu yemvelo eyomeleleyo ngokwaneleyo yokuthenga i-lutetium. Ukuba uyalela igramu ezili-100 ze-lutetium, kuya kuba neendleko malunga needola eziliwaka ezilishumi.
I-Atom zezinto zokuvelisa zibiza iindleko zeedola ukuvelisa. Ngamanye amaxesha azinakudinga ixesha elide ukuba lifumaneke. Izazinzulu ziyazi nje ukuba zazikho ngenxa yemveliso yazo yokubola.
Iincwadi ezi-8 zezoQoqosho zeeNcwadi zonke iiNkqubo zoLuntu zeMidlalo kufuneka zenze
Itheyibhile yoTyunjwa kwi-Verb Guardire yaseTaliyane